APIE ၏အပိုင်းအစ - 201ပြီလ 2019 သတင်းလွှာ - Austin Partners in Education
APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: Aprilပြီလ 2019 သတင်းလွှာ
ဧပွီ 30, 2019 ပွီ
မင်္ဂလာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကျေးဇူးတင်လေးမြတ်လ! ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအားကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းမရှိရင် APIE … APIE!
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးတယ်၊ - ဂျူဒီ
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြဖို့အချိန်ယူတယ်။ - မခင်မာ
"ကျနော်တို့ကအလုပ်တွေလုပ်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ပျော်စရာအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လို့ပေါ့။ - Gerardo
"ကျောင်းသားတွေကငါ့ကိုနုပျိုစေ!" - ဂျုံး
ရပ်ကွက်ကိုပြန်ပေးရတာကြိုက်တယ်။ လူတစ်ယောက်ကိုသင်ပညာရေးပေးရင်ငါးဖမ်းတာကိုသင်တာနဲ့တူတယ်။ - Dave
“ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းတိုင်းကနေကျွန်တော်အရမ်းကိုကျေနပ်မိပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ရပ်ရွာလူထုအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပေးရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ ” - Kalandra
စေတနာ့ဝန်ထမ်းမီးမောင်းထိုးပြ | Andrew Durham
ဟိုင်း Andrew! သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြအနေဖြင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုယခုအချိန်အထိမည်သို့ရရှိခဲ့ပြီလဲ။
ကောင်းလိုက်တာ ကျောင်းသားများသည်အလွန်လေးစားခြင်း၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တံခါးဝ၌လမ်းလျှောက်သွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့ရသော ၀ မ်းသာခြင်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျူရှင်ဆရာအမြောက်အများရှိသည်။ စာသင်ခန်းမှဆရာသည်အလွန်ကြိုဆိုသည် - ပတ်ပတ်လည်၌ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံ။
ငါတက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းအထက်တန်းကျောင်းသင်္ချာနည်းပြကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ နောက်တစ်ခါထပ်ပါဝင်ချင်တယ်၊ နောက်မျိုးဆက်ကိုအားပေးဖို့အကူအညီလိုချင်တယ်။ APIE မှအခွင့်အလမ်းနှင့်အခြားကျူရှင်ဆရာများ၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကြားရသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစာရင်းသွင်းရန်အတင်းအကျပ်ပြုခဲ့သည်။ ငါ့သားတွေကကျူရှင်ဆရာကိုကူညီပေးတဲ့ဒီကျောင်းသားတွေနဲ့ဆင်တူတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်းငါတို့ရဲ့အိမ်စာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံချက်ပေးတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းလုပ်ငန်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။
ငါ "lightbulb moment" ရှိသည့်တစ်စုံတစ်ယောက်အားသဘောတရားတစ်ခုထဲ၌နစ်မြုပ်သွားပြီးသူတို့စွမ်းရည်အသစ်ကိုပြန်လည်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတွေ့မြင်လိုသည်။ လူတစ် ဦး စီသည်သီအိုရီအသစ်များသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်အသစ်များကိုကောက်ယူရန်အချိန်အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျူရှင်ဆရာများအနေနှင့်ထိုအယူအဆကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အားပေးသည့်အပိုတစ် ဦး ချင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုအနည်းငယ်သာပေးနိုင်သည်။
သင်၏ကျောင်းသားများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များရှိပါသလား။
မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်သင်ခန်းစာအများစုအတွက်အချိုးအစားနှင့်ရုန်းကန်နေရသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ခေါင်းလောင်းသံမြည်သကဲ့သို့ညာဘက်ကိုနှိပ်လိုက်သည်။ အခြားသူများကထုပ်ပိုးပြီးသည်နှင့်သူမသည်ပြherselfနာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူမတွက်ချက်နိုင်သည့်အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူနေပုံရသည် (အိမ်စာအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ) ။
စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအနေဖြင့်သင်၏ကျောင်းသားများအပေါ်မည်သည့်ကြာရှည်စွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာအကျွမ်းတဝင်ရှိသောမျက်နှာတစ်ခုကိုပေးရန်၊ သူတို့အားအပတ်တိုင်းမေးခွန်းများမေးရန်နှင့်တိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ ငါသူတို့ကိုသင်္ချာနှင့်အတူကပ်ရန်ကြိုးစားကြိုးစားနေနှင့်သူကအဓိပ္ပာယ်စတင်လိမ့်မယ်အားပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုသင်္ချာကိုတကယ့်ကမ္ဘာမှာတကယ်သုံးတယ်ဆိုတာသက်သေပြချင်ပါတယ်။
၎င်းသည်ရုံးမှထွက်ပြီးရှုခင်းအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၀၀၁TP1T သည်ကျန်ရက်သတ္တပတ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ စာသင်ခန်းထဲတွင်ထိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ရက်သတ္တပတ် ၄၅ မိနစ်တွင်အမြန်ဆုံးနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသည် (မိဘများနှင့်ဆရာများ မှလွဲ၍) လူများသည်သူတို့ကိုဂရုစိုက်သည်ကိုတွေ့မြင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်အနာဂတ်၌စေတနာ့ဝန်ထမ်းရန်လည်းလှုံ့ဆော်နိုင်သည်။
အလှူရှင် Spotlight | အာမခံစက်မှုလုပ်ငန်းကုသိုလ်ဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်း
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Cathy Jones သည် IICF ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င် Norma Essary နှင့်တွေ့ဆုံသည်
APIE ၏ကောလိပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအစီအစဉ်အတွက်မကြာသေးမီကရရှိခဲ့သောထောက်ပံ့ငွေအတွက်အာမခံစက်မှုလုပ်ငန်းမှကုသိုလ်ဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်း (IICF) အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိပိုလျှံလိုင်းများပုံနှိပ်ခြင်းရုံး၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်သော IICF ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ Norma Essary က IIIEF အား APIE အားအကြံပြုခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိကလေးငယ်များအဖွဲ့သည်အဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုမှတဆင့်အာမခံလုပ်ငန်း၏စုပေါင်းအင်အားကိုပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကိုကူညီခြင်းနှင့်ဘဝကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံစေသည်။ ခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိကလေးငယ်များသည်အာမခံလုပ်ငန်း၏ပရဟိတလုပ်ငန်းအဖြစ် ၂၅ နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏နှစ်ပတ်လည်ပေးကမ်းမှုရက်သတ္တပတ်အတွင်း, IICF အဖွဲ့ဝင် Zenith ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်ပေးကမ်းမှုရက်သတ္တပတ်အတွင်း APIE ကိုထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးအခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအထောက်အပံ့များလည်းပေးခဲ့သည်။
APIE နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်၊ ငါပညာရေးနှင့်အတူကြီးပြင်းရန်အဘို့အဒါဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ငါသိ၏နှင့်ထိုအထွက်ဆိတ်ကလေးတိုင်းသူတို့ရဲ့အခြေအနေမည်သို့ပင်, တူညီတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် APIE လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့နဲ့အတူပါ ၀ င်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ငါ ၀ မ်းသာပါတယ်။ Lisa ကို - Zenith ကုမ္ပဏီ
ရက်စွဲကို Save! APIE သည်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သည့်ပွဲကိုကျင်းပနေသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန် ၅ ရက်။
Pease ပန်းခြံ - ညနေ 4:30 - 7:30 pm
Prevရှေ့မတ်လနွေ ဦး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
နောက်တစ်ခုAPIE ၏အချပ်: စက်တင်ဘာလ 2019 သတင်းလွှာနောက်တစ်ခု